AUTOCAD အတွက်စာသားရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို - AUTOCAD - 2019
စာသားမလုပ်ကွက် - ဆိုဒီဂျစ်တယ်ပုံဆွဲ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ သူတို့ဟာပမာဏ callouts, စားပွဲ, တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့်အခြားမှတ်စာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အသုံးပြုသူသူပုံဆွဲပေါ်တွင်လိုအပ်သောရှင်းလင်းချက်, စာတန်းများနှင့်မှတ်စုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သောလွင်ပြင်စာသား, မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိရမည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်သင်သည် AutoCAD အတွက်စာသားထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
1, လျင်မြန်စွာသည် "စာသားရဲ့လူပျိုလိုင်း" ကိုရွေးချယ်ပါ, တစ်ဦးပုံဆွဲရန်စာသားအားထည့်သွင်းရန် "စာသား" အတွက် tab ကို "အကျဉ်းချုပ်" panel ကိုအပေါ်တိပ်သွားပါ။
2. ပထမဆုံးကလစ်နှိပ်, စာသား၏ Starting Point သို့သတ်မှတ်။ မည်သည့်ဦးတည်ချက်အတွက် cursor ရွှေ့ - ရှည်လျားသည် dashed လိုင်းများကဖွဲ့စည်းစာသား၏အမြင့်ကိုက်ညီတဲ့။ သူမ၏ဒုတိယကလစ်နှိပ်သော့ခတ်။ third-click နှိပ်. ယင်းထောင့်ကို fix ကူညီပေးပါမည်။
ဒီမျဉ်းပြီးနောက် 3. စာသားကိုဝင်ဘို့အပုံပေါ်ပါတယ်။ စာသားရေးသားခြင်းပြီးနောက်အခမဲ့လယ်ပြင်နှင့်စာနယ်ဇင်း« Esc »ပေါ်တွင် LMB ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ quick စာသားကိုအဆင်သင့်!
1. စာသားကိုပြားသည် "စာသားအကွိမျမြားစှာလိုင်းများ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
2. စာသားတည်ရှိပြီးဖြစ်သောတစ်သေတ္တာ (ကော်လံ) ဆွဲပါ။ ပထမဦးဆုံးကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ဒုတိယသော့ခတ်ရန်သူမ၏မြင့်တက်ကိုမေးပါ။
3. စာသားကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သိသာအဆင်ပြေသငျသညျကော်မရှင်စဉ်အတွင်းတိုက်ရိုက်ဘောင်ကိုချဲ့ထွင်သို့မဟုတ်ကျုံ့နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အခမဲ့အာကာသပေါ် 4. နှိပ်ပါ - စာသားအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကတည်းဖြတ်ရန်သွားနိုင်ပါတယ်။
1. စာသားကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ panel က "စာသား" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စကေး။ "
2. AutoCAD အတွက် zoom ကို၏စမှတ်ရွေးဖို့ကိုသင်ပြ။ ဒီဥပမာမှာ, ကအရေးမပါဘူး - "ရရှိနိုင်" ကိုရွေးချယ်ပါရန်။
အမြင့်ကိုပြောင်း, သင်အခြေအနေတွင် menu ကနေခေါ် Properties ကို pane ထဲက, ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း "စာသား", အ eponymous လိုင်း၏အမြင့်ထားကြ၏။
တူညီသော panel တွင်သင်သည်စာသားကို၎င်း၏လိုင်း width နဲ့ positioning ကို parameters တွေကိုများ၏အရောင်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ယခုတွင်သင်သည် AutoCAD စာသားထဲမှာ tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိသော။ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားဘို့သင့်ရေးဆွဲစာသားကိုသုံးပါ။
ဗီဒီယို Watch: AutoCAD - Complete Tutorial for Beginners - Part 1 (အောက်တိုဘာလ 2019).